» रिता नै हो त दोहोरी च्याम्पियनको विजेता ?
रिता नै हो त दोहोरी च्याम्पियनको विजेता ?
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार २०:४१
मकवानपुर, ३ जेठ । चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को आठौँ दोहोरी भिडन्त रिता राउत क्षेत्री र सविन आचार्यको टिमले जितेको छ । रिता र सविनको जोडीले श्याम राना र बबिता गुरुङको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनीहरुले श्याम र बबितालाई १४ अंकले पछाडि पार्दै उत्कृष्ट १२ को यात्रा तय गरेका छन् । दोहोरी भिडन्त जितेसँगै केही दर्शक श्रोताले विजेतामध्ये रिता राउत क्षेत्रीको आवाज अनि उनले जोडेका टुक्काहरुको विषयमा निक्कै प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले दोहोरी च्याम्पियनको विजेता रिता नै हुने भन्दै ठोकुवा समेत गरेका छन् । हुन पनि रिताले दोहोरी भिडन्तमा निक्कै राम्रो गीत गाउँदै निर्णायकहरुको प्रशंसा समेत पाएका थिए । निर्णायक प्रजापति पराजुलीले सानै उमेरमा आत्माविश्वासका साथ दोहोरीका धुरन्धरहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेको र सुरिलो स्वरमा दोहोरी गाएको भन्दै रितालाई स्यालुट नै गरेका थिए । निर्णायक सिता थापाले पनि रिताको प्रशंसा गर्दै उनले लगातार रिताले दोहोरी भिडन्तमा प्रतिस्पर्धीलाई प्रहार गरेको बताएकी थिईन् ।
निर्णायक रमेश बिजीले रितालाई आफ्नो मनको दोहोरी च्याम्पियनका रुपमा रितालाई पाएको बताएका थिए । रिताको आत्माबलको पनि चर्चा गर्दै उनले रिताप्रति निक्कै सम्मान जागेको बताए । रिता जस्तो राम्रो प्रतिभा भेटिँदा सबै सर्जकहरु खुशी हुनुपर्नेमा पनि उनले बताए । त्यस्तै निर्णायक चन्द्र शर्माले रिताको सुरिलो स्वरबाट प्रभावित भएको बताए । उनलाई लोकदोहोरीका क्षेत्रमा उदाउँदो ताराका रुपमा चर्चा गर्दै निर्णायक चन्द्र शर्माले रिताको प्रशंसा गरेका थिए ।
रीता र सविन दोहोरी च्याम्पियनको फिजिकल अडिसनदेखि नै चर्चामा थिए । दोहोरी च्याम्पियनमा निर्णायकहरुबाट सर्वाधिक प्रशंसा पाएकी रिताले लोक दोहोरी क्षेत्रमा नयाँ ईतिहास रच्ने दर्शक श्रोताहरुले अपेक्षा गरेका छन् । के दर्शक र श्रोताहरुले सोचे जस्तै रिता नै दोहोरी च्याम्पियनको विजेता बन्लान् त ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–